Abavelisi bePostrail Post kunye nabanikezeli - China iGravel Post Post
U bumba isithuba
C ukumila iposti
Isithuba ikakhulu silandela i-AASHTO M180, i-GB-T 31439.1-2015 kunye ne-EN1317 esemgangathweni. Izinto ezenzelwe ikakhulu i-Q235B (S235Jr amandla esivuno angaphezulu kwe-235Mpa) kunye ne-Q345B (S355Jr amandla okuvelisa angaphezulu kwe-345Mpa). Ukutyeba kwe-guardrail ikakhulu nge-4.0mm ukuya kwi-7.0mm okanye ulandele iimfuno zabathengi. Unyango lomphezulu luyatshiswa kwalenza, ukulandela i-AASHTO M232 kunye nomgangatho olinganayo ofana ne-AASHTO M111, EN1461 njl njl.
H ukuma iposti
Isithuba ikakhulu silandela i-AASHTO M180, i-GB-T 31439.1-2015 kunye ne-EN1317 esemgangathweni. Izinto ezenzelwe ikakhulu i-Q235B (S235Jr amandla esivuno angaphezulu kwe-235Mpa) kunye ne-Q345B (S355Jr amandla okuvelisa angaphezulu kwe-345Mpa). Ukutyeba kwe-guardrail ikakhulu nge-4.0mm ukuya kwi-7.0mm okanye ulandele iimfuno zabathengi. Unyango lomphezulu lushushu lwathi nkxu, ukulandela i-AASHTO M232 kunye nomgangatho olinganayo njenge-AASHTO M111, EN1461 njl njl.
Imilo Round isithuba
KUMMANDLA WOSHISHINO WENKULUNGWANE ENTSHA WOMMANDLA WEGUAN, LIAOCHENG, KWIPHONDO LASESHANDONG, ECHINA